News of Entertainment | Lifemandu
शुक्रबार, ८ असोज, २०७८, | Friday, Sep 24, 2021
दीपक–दीपालाई ऋचाको जवाफ : भुइँसँग नजोडिनेको जग बलियो हुँदैन !
उनले एकादेशमा फिल्म फेस्टिभलुमा ‘चलचित्रमा महिलाको भूमिका’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा फिल्ममा महिलालाई थप्पड हानेको दृश्य आफूलाई पाच्य नलागेको बताएकी थिइन्।
लामो समयसम्म चलेका बलिउडका १० फिल्म, जसमा कुनै १ हजार ९ हप्तासम्म चलेको थियो
एजेन्सी । भारतमा हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी फिल्म बन्ने गरेका छन् । तीमध्ये केही ठूलो ब्यानर र सुपरस्टार कलाकारका हुने गर्छन् भने धेरैजसो फिल्म सानो ब्यानर, कम बजेट, औसत तथा नयाँ कलाकारका हुने गर्छन् ।
‘छक्का पञ्जा २’ हेरेर ताली बजाउने दर्शकहरु मुर्ख हुन्ः अभिनेत्री ऋचा शर्मा
काठमाडौं । नायिका ऋचा शर्माले नेपाली चलचचित्र ‘छक्का पञ्जा’ हेरेर ताली बजाउने दर्शकहरु मुर्ख भएको बताएपछि उक्त चलचत्रि टीम नै उनीमाथि खनिएका छन् ।
यसकारण टुटेको थियो नाना पाटेकर र मनिषा कोइरालाको सुमधुर सम्बन्ध
एजेन्सी । ’सौदागर’ बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला कुनै समय आफुभन्दा २० बर्ष जेठो अभिनेता नाना पाटेकरसँग अफेयर रहेको चर्चा चलेको थियो ।
किन हुँदैछ सलमान र ऐश्वर्याको टक्कर ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । सलमान खान र ऐश्वर्या राय बच्चनका फ्यान दुबैलाई एकसाथ देख्न चाहन्छन् । यी दुबै एकै चलचित्रमा कहिले देखिने हुन्, यसको भने अहिले टुङ्गो छैन । तर यी दुबै एक अर्कोलाई टक्कर दिँदै एकसाथ भिड्ने भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकी यी युवती को हुन् ?
एजेन्सी । सुन्दरताको परिभाषा फरकफरक हुन्छ । तपाईंले सुन्दर मानेको मानिस अर्कालाई कुरूप लाग्न सक्छ ।
अभिनेत्री राखी सावन्त बाबा रामदेबसँग विहे गर्न चाहन्थिन्
एजेन्सी । बलिउडमा निकै चर्चित नाम हो राखी सावन्त । जो धेरै पटक आफ्ना विवादास्पद भनाईको कारण चर्चामा आउने गर्छिन् ।
‘रेप सीन’ पछि माधुरी दीक्षितले भिलेनलाई भनिन्, अब मलाई हात पनि नलगा किनकी...
एजेन्सी । बलिउड वा हलिउड चलचित्रमा जुन दृश्य सजिल्यै देखिन्छ त्यहि दृश्यले अभिनेत्री तथा अभिनेतालाइै निकै पीडा दिएको हुनसक्छ । चलचित्रमा स्टन्ट, रेप सीन यस्तो खतरनाहक हुन्छन् कि स्टार उक्त दृश्यलाई लिएर जीवनभर भुल्न नसक्ने हुन्छन् ।
चलचित्र ‘पद्मावती’ को विरोधमा एक युवकको हत्या गरेर झुण्ड्याइयो शव
एजेन्सी । बलिउड चलचित्र ‘पद्मावती’ को विरोधमा चेतन कुमार नाम गरेका एक युवकको शव झुण्डिएको अवस्थामा नाहरगढ फोर्टको पर्खालमा फेला परेको छ ।
‘मायाको कुरा’ गर्दै गायक आसुतोष राई (भिडयोसहित)
काठमाडौं, मंसिर ७ । गायक, रचनाकार तथा संगीतकार आसुतोष राईको ‘मायाको कुरा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।